Intengo Yemoto Ehle Yesibani Sabakhubazekile Esihamba Ngamasondo China Manufacturer
Incazelo:I-Electric Stair Climbing Wheelchair,IStair Climbing Wheelchair Electric,IStair Climbing Electric Wheelchair
 HomeImikhiqizoImikhiqizo YokupholisaIsihlalo esinamasondoIntengo Yemoto Ehle Yesibani Sabakhubazekile Esihamba Ngamasondo
I-Model No.: CL-WW0001
Isondo elinyukayo liza nesihlalo esinamasondo esezingeni eliphezulu (ene-adaptha), okuyinhlanganisela yezakhi zokwenyuka nezihlalo ezinamasondo. Izingxenye ezikhuphukayo zingahlukaniswa ngokukhululekile futhi zifakwe, futhi zingasetshenziswa njengezihlalo ezinamasondo ezijwayelekile lapho ukhuphuka izitebhisi (izingxenye ezikhuphukayo azidingi kususwa). Lapho umgibeli okhuphuka izitebhisi enyuka izitebhisi, udinga kuphela ukukhipha izinhlangothi zombili zesondo ukuze alungise isondo lize likhuphuke kancane, ngakho-ke kukhona ithuba elanele leyunithi yokugibela yokukhuphuka izitebhisi. Isondo elihamba ngesihlalo sabakhubazekile ngokwalo futhi lizinze kakhulu, lingakwazi ukugoqwa kalula futhi licwecwe uma lingasebenzisi.
1. Kungasiza abantu abakhubazekile abakhubazekile ukuthi bakhuphuke futhi behle ezitebhisini kalula, okwenza umsebenzi wabahlengikazi ubelula futhi uphephe.
2. Umshini wokukhuphuka nawo ulungele izitebhisi ezixineneyo neziyincane nezitebhisi ezithandekayo.
3. Umshini wokukhuphuka kagesi wamukela ukuhlela okuhlelekile kokudidiyela, okungasuswa kalula futhi kube lula ukuthwala.
I-4, uhlobo lwesakhiwo sokukhuphuka lungashintshwa phakathi kokukodwa nokuqhubekayo. Kunezindlela ezintathu zokugibela isivinini. Ukuphakama kwesitebhisi okuphezulu okusebenzayo cishe kungama-550px.
Ngokusho komthwalo ohlukile, ingakhuphuka amamaki angama-300-500, ngokuvikelwa okwenziwe ngomshini nangobuchwepheshe ngokweqile ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile.
6. Isitebhisi esiqinile esinesilinganiso esingu-100mm sisehlangothini lwangaphakathi lwesondo lemoto eceleni kwevili lokulinganisa, ngaleyo ndlela sivikele ukushayisana kanye nomonakalo ohlakeni lomnyango.
Ukhuphuka isihlalo se-ginseng
1. Ipuleti yokusekelwa yonyawo olungafinyeleleki ngobude obuguqukayo ne-engeli. 2. Izingalo ezisongelayo zokugoqa
3. I-kiti cushion ingu-457mm kanti ukujula kungama-430m.
4. Ububanzi besondo bungama-260mm kanti ithrekhi engaphandle ingama-430mm
Izigaba zomkhiqizo : Imikhiqizo Yokupholisa > Isihlalo esinamasondo
Ikhaya Lasebhedlela Likahle Lensimbi Yensiza Yensimbi Eqinile Xhumana Nanje
Isihlalo Sihlala Esibhedlela Esiphansi Esikhathele Isibhedlela Xhumana Nanje
I-Good Price Elula Ephathekayo Ehambayo Yesihlalo Samasondo Isiguli Xhumana Nanje
Ikhwalithi Enhle Yensimbi Engenalutho Ekhubazekayo Yakhubaza Yesihlalo Sezinesihlalo Xhumana Nanje
Insimbi Engagqwali Ekhutshazekile Yenza I-Manual Wheelchair Yenzeke Xhumana Nanje
I-Manual Soft Ehambayo Ekhuthazayo Yesihlalo Sabantu Abakhubazekile Bakhubazekile Xhumana Nanje
I-Manuel Elula Yesivinini Esinezifo Eziphuthumayo Xhumana Nanje
Idizayini Yesiqalo Esinezinyathelo Ezilulayo I-Aluminium Yesihlalo Samasondo Xhumana Nanje
I-Electric Stair Climbing Wheelchair IStair Climbing Wheelchair Electric IStair Climbing Electric Wheelchair I-Electric Steam Sterilizer Steelless Stainless Wheelchair I-Home Steel Steel Wheel Chair I-Foldable Lightweight Wheelchair I-Electrosurgical ESU Ipensela